2007 Ndokumbirawo Uuye neVatsva Editors | Martech Zone
Chipiri, Zvita 26, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Imwe yangu Predictions ye2007 ndeye mupepeti mutsva wewebhu ine 'gadziriso munzvimbo' mashandiro. Ini ndinoda zano rekugadzirisa munzvimbo… pane kupinda mukati kuburikidza nechero rakamisikidzwa manejimendi, mushandisi anogona kungotanga typing uye kuvaka yavo HTML nzira yavanoshuvira.
Heano mamwe akazara zvinyorwa zveblog pane Hora munzvimbo kubva kuna Joseph Scott. Kana usiri mugadziri uye iwe uri kushamisika zvandiri kutaura nezvazvo, heino muenzaniso peji. Joseph ane mutsa zvakakwana kuti aite rese rake basa riwanikwe kurodha pasi.
Ndiri kutarisira kune mumwe munhu anogadzira nyowani nyowani mupepeti zvakasiyana bani 'ol Microsoft Word mupepeti iro rinoratidzika kunge riri kubuda kwese kwese pawebhu. Zvinotaridza sekunge kunyangwe Microsoft iri kubhaiza pane iyo neHofisi 2007 ine nyowani 'Ribbon' interface. Zvakaipa zvakakwana muOffice yazvino (pane chero munhu anowana mabara kuti ashande handiti?), Izvozvi tinofanirwa kuzviona pawebhu rese? Kunyangwe Google Docs inoshandisa yakafanana mupepeti (uye mabara haashande ipapo, chero).
Tinoda paradigm nyowani yekugadzirisa zvinyorwa, mharidzo, html, email, nezvimwe. Gadziridza munzvimbo inogona kuve kutanga kweiyi paradigm. Ndakaverenga chirevo chikuru mu Mavericks Kubasa: Nei Akanyanya Akapfuura Pfungwa Mune Bhizinesi Vanokunda vhiki ino kubva kuna ING Direct's Arkidi Kuhlmann:
Kana iwe ukaita zvinhu nenzira inoitwa nemunhu wese, nei uchifunga kuti uchaita zvirinani?
Kune mazhinji makambani, saiti, mablog, nezvimwewo uye yavo email kutaurirana, panotove neakatsanangurwa maitiro kune fomati yebasa ravo. Fungidzira iko kunyorera uko maneja wekambani maneja anogona kungonamira yavo sitepa pepa mune chishandiso uye "gadzirisa munzvimbo" zvinoita zvakasara ?! Hazvingave zviroto here kuti zviitike?
Kugadziridza kungave kuri pasi kune zvinyorwa nemifananidzo… iyo nhamba yemabhatani uye mamenu anogona kunge akaganhurirwa. Kune vamwe, pamwe zvingori zvinyorwa zviri pachena izvo vanhu vanobvumidzwa kupinda uye hapana chimwe chinhu!
Ndiani akagadzirira kuzvivaka?
Tags: cmscontent managementcontent management systemsedit-in-nzvimbomupepetihtml mupepetichinyorwa mupepeti
Tenga uye Tengesa Kadhi Kadhi Pamhepo!